Ma xaqbaa in shariif xasan shiikh adan uu ku mucaarado shirkii ay gareen barlamaanka DFKM ah?!!!!
By:Mohamed Mohamoud Osman (Qoordheere)
E-mail Address: Mlambo77@hotmail.com
Ra'yi :- Shariif xasan shiikh adan oo ah godoomiyaha baarlamaan dfmkee somalia maha in uu maanta ka horyimaado xumaada horu markeeda iyo hanaankeeda siyaasadeeda lakiinse waxaa la yaab ah nin meel ka ah madaxa u sareeya oo meeshuu u ahaa mada usareeya uu dhuminaayo waxaa la arakay shariif xasan shiikh adan.
Shariifka oo ah Runtii Gudoomiyaha baarlamaanka KMG isla markaana ah awoodda ugu sareysa ee sharci dajinta ayaa ku gacanseyrey inuu amar ka qaato Madaxweynaha , isagoo shariifku sheegay in isagu uu yahay hay'ad ka madaxbanaan hay'adda fulinta ama dowladda oo uu isan marnaba amar ka qaadan karin Madaxweynaha ama dowladda midna.
Taas na waxay muujinaysaa in shariifku uu yahay mucaarad ama gooni socod hadii shariciga loo fiirshi shariifku waxaa ku socdaa wada khalada ah oo ka baxsan qodobada u yaal dfkm ee soamalia markaas sharcigii ayuuu ku tuntay meel laga batay aqlabiyad ahaan 149 meeshii laga rabay in noqdaan aqlabiyada u gu hgoraysa 138 balse hada ay dhaaftay xurduntii ama barihii baarlamaanka marka shariif ka maantay waxaa uu muujiyey kelisocod .
Maanta waxaan filaynay hadaanu nahay ardayda somaliyeed ama dhaam umada somaliyeed meel kasta ay joogto dowlad somaliyeed oo ane tan ka danbayn ayaan suagaynay balse maantay Somalidu waxay ku maahmaahdaa (meel lataabo madaxaa ugu sareeysa ) .
Hadii uu madaxu xumaado inta ka hartay jirka way xumaanayaan ,taasna waxaan ka wadaa shariika oo an madixii ugu sareeyayey ee dowlada maaha in uu maanta noqdo qabqable ama uuku biiro raga hogaamiya kooxeedada taasna waa wax hada soo baxay waa wax layaab leh ,War shariif fekradee ku soconaysaa maataadaa ku soconaysaa mase fikiradii hii qabablayaashe mase waxaa ku so conaysaa shariga iyo kala danayta ?.
Ugu danbaytii Waxaan ani taageero seniyaa xubnaha sida wada shaqaynta mudan ,sharafta mudan uga shaqayey midnimada somalliyeed iyo dhaman intaa sharicigii u oolaaa dowlad raacay.
Waxaan talo usoo jeedinayaa dhaamaan qabqablayaasha shariifka oo isu magcaabay qabqable misna ah ganacsade oo marsadexad ah godoomiyaha DFKM ah in uu ka soo noqdo kuwii ku dhaqma tasduurka u yaal dowlada somaliyeed uu hgaaminayo Mudane:C/laahi Yuusuf Axmed iyo in uu shariifku ku soo noqdo shaqadiisii uu sida wanaagsan ukala wadi jiray .
War qabqab layalow maxaa ku danbayn mustaqbalka?